China 7 Axis Robotic Arc Welding Workstation Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
7 Axis robhoti arc welding station ndeimwe yeako compact gadziriso yewelding, inogona kushandiswa kumotokari spare parts, bhasikoro, mota yemagetsi, midziyo yekurapa nezviridzwa, midziyo yekusimbisa muviri, fenzi, chivharo chemvura, muchina wepurazi nekuchengeta mhuka.
Robhoti inopindirana neyekunze axis kuitira kuti inogona transfrom akawanda zvinzvimbo akakodzera welding.
Iyi yakajairwa welding yekushanda chiteshi ndeye compact, inokurumidza, nyore kuchengetedza.
Robotic Arc Welding Workstation
Mune inoshanduka otomatiki, marobhoti eindasitiri ari pakati pezvinhu zvakakosha.Vanobvumira maitiro otomatiki kuti agadziriswe nekukurumidza.Iyo YOO HEART robhoti yekushanda chiteshi uye mazinga ayo emidziyo inoita maitiro uye mabasa anogoneka ayo anodiwa mukugadzirwa kweindasitiri yekumisikidza uye kugadzirisa kwemarobhoti-akavakirwa basa maseru.Kunyangwe yerobhoti yakajairika, idiki chiteshi chekushanda chinogona kugamuchirwa nevashandi.
YOO HEART 7 Axis Robotic welding workstation ndiye mutengesi wedu wepamusoro, kana chidimbu chako chebasa chisina kuoma, iyi nzvimbo yekushandira ichakubatsira iwe kukurumidzira kugadzira kwako.Ichi chiteshi chinosanganisira imwe 6 axis welding robhoti, welding magetsi sosi, imwe axis chinzvimbo uye zvimwe zvinobatsira zvepaperipheral.Kana uchinge wagamuchira chikwata ichi, robhoti rinogona kushanda mushure mokunge mapulagi ese mukati. Tinogonawo kukupa mabhanhire akareruka kuitira kuti iwe ugone kukwana chikamu chebasa chakatsiga uye nekukurumidza.
HY1006A-145+1 Axis chinzvimbo
Mufananidzo wekuruboshwe unoratidza Standard welding robhoti batanidza ekunze axis.
inoshandiswa kuAuto parts welding.ekunze axis anogona synergy pamwe robhoti.
Red Yooheart robhoti welding station
Mifananidzo yekurudyi ndiyo Yooheart robhoti inoshandiswa minbus Door rutsigiro positi.
Arc welding performance yakanaka.
Denderedzwa welding musono
Mumufananidzo uyu, Uchishandisa Megmeet Ehave CM 500 AR welding, TRM 500A mvura inotonhorera torch uye batanidza 1 axis positioner netafura Diameter 800mm.Fillet welding.
Zvakapfuura: Palletizing Manufacturing Robhoti - Painting robhoti HY1050A-200 - Yunhua
Zvinotevera: Tig welding robhoti ine waya feeder